घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू बर्नोडो सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ;'लिटिल मेसी'। हाम्रो बर्नार्डो सिल्वा बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले बर्नार्लो सिल्वाको उन्नत प्लेमेक क्षमताहरू बारे जान्दछ तर केहि रोचक छ कि पिच बाहिर केही जीवनलाई विचार गर्नुहोस्। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
Bernardo Mota Veiga de CarvalhoeSilva अगस्त को 10th मा उत्पन्न भयो, 1994 मा लिस्बन, पोर्चुगल माटा वेगा सिल्वा (बुबा) र मारिया जोओ सिल्वा (आमा) लाई।
एक जना केटाकेटीको रूपमा, उनीहरूले बेनिफाइलाई समर्थन गरे। उहाँ उच्च IQ सँग उज्ज्वल जवान चीज हुनुहुन्थ्यो। उनको मनोवृत्ति र कडा काम फुटबल संसारमा आज कहाँ छ भनेर मापदण्ड थियो।
उनले आठ वर्षको उमेरमा आफ्नो फुटबल क्यारियर सुरू गरे र अन्ततः युवा युनिभर्सिटीको माध्यमबाट प्रगति गर्नुअघि उनले 2013 मा पुर्तगाली फुटबलको दोस्रो स्तरीयमा बेनफिका बी को लागि पहिलो पटक बराबरी गरे। Bernardo nicknamed 'Messizinho ' र 'लिटिल मेसी' किनभने उनको धेरै प्रतिभा को।
तर,जर्ज मेन्डेस उनको एजेन्ट हो
बर्नार्ड विश्वव्यापी रूप मा बदलिएको जर्ज पाउलो अगोस्टेन्नो मेन्डेस को एक ग्राहक हो। Mendes विश्वका सबैभन्दा प्रभावकारी फुटबल एजेन्सीहरू छन्, ग्राहकहरू सहित क्रिस्टियानो रोनाल्डोडेविड डी गी, डिएगो कोस्टा, जेम्स Rodríguez, मार्सोस रोजो र जोसे माउन्टेन। उहाँ प्रायः को रूपमा उल्लेख गरिन्छ "सुपर एजेन्ट".
उहाँ नाम दिइएको छ वर्षको सर्वश्रेष्ठ एजेन्ट 2010 देखि 2015 सम्म छ लगातार लगातार पल्ट ग्लोब फुटकर पुरस्कार। Mendes एक फुटबलरको रूपमा सुरु भयो तर उनीहरूको प्रारम्भिक 20s मा भएको बेला पोर्चुगल क्लबहरूको खारेज गरेपछि एक व्यावसायिक क्यारियरको आशा छोड्न बाध्य भए। बरु, उनले एक भिडियो भाडा पसल भागे, डीजेको रूपमा काम गरे र पोर्चुगलको उत्तर-पश्चिममा नगरपालिकामा क्यामेनामा एक पल्ट र नाइट क्लब खोल्यो।
धेरैलाई विश्वास छ कि प्लेमकरले मैनचेस्टर युनाइटेडमा सामेल हुने बेलामा मोनाको छोडेर 'सुपर एज एजेन्ट' जर्ज मिन्डिजसँग लिङ्कको कारणले गर्दा उनीसँग ग्राहकको रूपमा म्यानस मोरेनियोको प्रबन्धक छ। गार्डियोलाले च्याम्पियन्स लीग क्वार्टर-फाइनल-फाइनलमा विजेता मोनाकोको 5-3 ह्रासका क्रममा उनीहरूलाई असर पारेका थिए।
तर,एक पल्ट बायाँ ओभर
बेन्जफिकाको जर्ज यीशुले आफ्नो क्लबमा ठूलो चीजहरू प्राप्त गरे। तर यस दिनको लागि क्लबका प्रशंसकहरूले घरपरिभाषीमा विश्वासको कमीको बारेमा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छन् भने बर्नार्डो सिल्वाले सर्वोत्तम उदाहरणको रूपमा उद्धृत गरे।
उनीहरूले जवान प्लेमकरलाई कहिल्यै विश्वास गरेनन्। एक मौसमको लागि, जर्ज यीशुले बर्नफिकाको पहिलो टोलीको लागि तीन म्याचमा केवल 31 मिनेट खेल्न बर्नार्डोलाई अनुमति दिए। बर्नार्डो सिल्वाले भर्खरै भर्खरै स्वीकार गरे कि येशूका अनुसार 'बेन्फिकाको वरिष्ठ पक्षको पखेटाको कुनै आशा छैन', यसो भन्छ: "जर्जले मलाई बायाँ-ब्याकमा बेनफिकामा प्रशिक्षण दिँदा मैले एन्टिभर्सिटीमा कुनै भविष्यको अनुभव गरेन।"
बेनफिका बर्नोडोको क्लब हो जुन उनको हृदयमा प्रिय थियो। त्यसैले प्रियको हृदयमा उहाँका आदर्श वाक्य हो 'ई प्लुरिब्यू यूनिम' उनको बायाँ हातमा टुट्यो। तिनीहरूको साथ उनको सपना जर्ज यीशुद्वारा फैलिएको थियो।
तर,समान नामहरू, समान प्रकारको खेलाडी, राम्रो मित्रहरू
शहरमा पुग्दा प्लेमकरले उनीहरूलाई ट्वीट्ससिटमा सिल्वा मात्र होइनन्। दुवै राम्रो साथी बनेका थिए उनीहरूले समान नाम र व्यक्तित्व र पिचमा लक्षणहरू देखाउँछन्। तिनीहरू दुवै एक किफायती बायाँ-पैदल, पासको आँखा, गुरुत्वाकर्षणको एक कम केन्द्र र एक गोर्खा क्षमता रहेको छ जसले विपक्षी सुरक्षालाई प्रहार गरेको छ।
तर,निद्रा र बुद्धिमानी ट्रिट
बर्नार्डो सिल्वाले प्रत्येक प्रशिक्षण व्यायामको लगभग एक घण्टा पछि आँखाको साथ बन्द गर्दछन्। आफ्नो सोच क्षमता को बढावा र पिच मा उनको खुफिया को लागि जिम्मेदार छ। यसले उसलाई संसारको सबैभन्दा बुद्धिमान फुटबल बनाउँछ। पत्रकारहरूलाई उनीहरूको विचारशील र सुव्यवस्थित प्रतिक्रियाहरूमा उहाँका खुफियाहरू पनि देखिन्छ।
बर्नार्डो सिल्वाले आफ्नो सँगी शहर टोलीले नयाँ देश, नयाँ भाषा र नयाँ संस्कृतिलाई अनुकूलन गर्ने क्षमतालाई देखाएको छ। उहाँ फुटबल माइग्रेसनमा प्रयोग गरिएको छ। फ्रान्समा छिट्टै प्रारम्भिक उमेरमा बसोबास गर्दा उनीहरूलाई एक व्यक्तिको रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्यो।
सौभाग्य देखि उनले इंग्ल्यान्डमा आउँदै गरेको सपना देख्नु अघि अंग्रेजी भाषा सिके। बर्नार्ड बुद्धिमानी र उनको निद्रा स्वभाव हो, पछि प्रशिक्षणले उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकताको बारेमा सोच्ने क्षमता प्रदान गर्दछ र "सूर्यको चमक हुँदा घाँस बनाउनुहोस्"।
तर,लीग 1 प्लेयर को वर्ष 2016-2017 सीजन
यो सिल्भा भएको थियो, एडिनसन क्याभनीको विरोधको रूपमा, जसले लिग्यूएक्सएनएमएक्सएक्स प्लेयरको वर्षको शीर्षक उठायो, तर मोनाको यति धेरै तारा थिए, उनीहरूको मतभेद सम्भव थियो। यो बाट अन्तरदृष्टि हो लक्ष्य.
फ्रान्सको दक्षिणी तटमा सबै चौंका खेलाडीहरूको यो मौसम, तथापि, यो पोर्चुगल थियो जो अभियानको अवधिको लागि सबैभन्दा बढी थियो।
उनको पूर्व टीम-साथी फेबिनोले फेब्रुअरीमा स्वीकार गर्यो, 2017: "उहाँ दलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन सक्नुहुन्छ। Radamel Falcao र किलियन Mbappe जस्तै प्राइभेटरहरूको तुलनामा उनको योगदान सजिलै संग अनदेखी गर्न सकिन्छ। सबै पछि, उहाँ अचम्म लाग्दो संख्यामा एक खेलाडी होइन। समान रूपमा, उहाँले छेउ, विस्फोटकता वा बिन्यामीन मिन्डी वा तिमोउ बेकिओको जस्तै शक्ति प्रदान गर्दैन। जब म 2014 मा मोनकोमा पुगें, मलाई थाहा थिएन कि यो यो जस्तै जान्छ। साँच्चै, तिनी फ्रान्समा एक अज्ञात रूपमा आइपुगे। मैले सोचेका थिए कि बेनिफिकाको वरिष्ठ स्क्वाडमा मात्र एक खेल पछि उनको हस्ताक्षर गरे। आज, त्यो केहि बनिरहेको छ।
तर,उहाँ जर्डिमलाई सधैं महान हुनुहुन्छ
बर्नार्डो सिल्वाले स्वीकार गरेका छन् कि उनी धेरैजना छन् लियोनार्डो जर्डिम जो एक पूर्व कोच भन्दा उसलाई एक पिता जस्तै छ।
तिनका शब्दहरूमा... "व्यक्तिगत रूप देखि, Jardim ले मलाई धेरै दिए," बर्नार्डो सिल्वाले पुष्टि गर्छ। "उहाँले युवा खेलाडीहरूसँग राम्ररी काम गर्नुहुन्छ। उनले देख्यो कि म जवान हुनुहुन्थ्यो र मलाई मौका दिईयो। मेरो टाउकोमा मैले फरक महसुस गरे। मैले केवल3महिना फ्रान्सेली क्लबमा सामेल हुन सहयोग गरेको छु। "
जेदिमले उनलाई धेरै माया गरे कि उनले उनलाई 10 शर्ट को पेशकश गरे पछि उनलाई एक पारंपरिक संख्या 15 को क्लब मा बना दिए। कारण यो छ किनभने उनले आफ्नो प्यारा बायाँ खुट्टा, तिनको आंदोलन र डिलबलिङ कौशलको प्रशंसा गरे। Bernardo 132 / 1 मा क्लब को लिग्यू 2016 शीर्षक मा मदद गर्न मोनाको को लागि 17 उपस्थिति बनाइयो।
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 12, २०२०